Ethiopia Membership - MAJORITY
Welcome to MAJORITY’s Ethiopian community! Enjoy exclusive benefits including an FDIC-insured account, no-fee money transfers to Ethiopia, no-fee airtime, and low cost calling to Ethiopia all in one mobile app.
No-fee money transfers to Ethiopia
No-fee airtime to Ethiopia and more
Low cost international calling to Ethiopia
A card that rewards you for supporting local Ethiopians
Support loved ones with no-fee money transfers to Ethiopia
You can send international money transfers to Ethiopia at an amazing exchange rate directly through the MAJORITY app.
Send airtime to Ethiopia instantly
Don’t go a second without being able to connect to loved ones in Ethiopia. Send no-fee mobile top-ups instantly to Ethiopia and 35+ other destinations.
Lowest calling rates to Ethiopia
Starting at only 18.98¢/minute to call any phone in Ethiopia